Waa kuwee shaqsiyaadka loo malaynayo inay buuxin doonaan Jagadii uu Kooxda Manchester United ka hayey Ed Woodward ee uu iska casilay? – Gool FM
(Manchester) 22 Abriil 2021. Guddoomiye ku xigeenkii fulinta ee kooxda Manchester United, Ed Woodward ayaa dhowaan xilkaas isaga tagay, waxaana hadda la sii saadaalinayaa shaqsiga beddeli doona booskaas.
Madaxa fulinta Kooxda Ajax ee Edwin van der Sar ayaa lagu soo warramayaa inuu ka mid yahay musharixiinta doonaysa inay bedel u noqdaan booska uu banneeyey Ed Woodward, isla markaana uu noqdo guddoomiye ku xigeenka fulinta ee kooxda Manchester United.
Man Utd ayaa ku dhawaaqday Talaadadii in Woodward oo isaga dagay jagadii uu ka hayey kooxda laga soo bilaabo 2012-kii.
Ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar ka hor markii Red Devils ay isaga baxday tartanka cusub ee European Super League, inkastoo ay kooxdu ku adkaysanayso in labadaas arrimood aysan isku xirnayn.
Baadi-goobka beddelka Ed Woodward ayaa durbaba socda, Majaladda Manchester Evening News ayaa soo jeedinaysa in goolhayihii hore ee Man United, Van der Sar uu ka mid yahay dadka la tixgelinayo booskan.
Van der Sar ayaa lix sanadood ku soo qaatay garoonka Old Trafford waqtigiisii uu ciyaaraha ku guda jiray, waxa uuna ka mid ahaa shaqaalaha qolka labiska ee Ajax ilaa iyo 2012, waxaana ku jira shantii sano ee ugu dambeeysay ee uu ahaa Agaasimaha guud.
Agaasimaha haatan ee Man United, Richard Arnold iyo Cliff Baty oo haatan ah madaxa dhaqaalaha kooxda ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay ku jiraan qorshaha ay kula wareegayaan jagada Ed Woodward.